Madaxda Paris Saint-Germain Oo Ka Qoomameeyay Go’aankii Ay Heshiiska Ugu Kordhiyeen Neymar
HomeWararka CiyaarahaMadaxda Paris Saint-Germain oo ka qoomameeyay go’aankii ay heshiiska ugu kordhiyeen Neymar
April 6, 2022 Wararka Ciyaaraha, Horyaalka France, Suuqa kala iibsiga 0
Madax sare oo ka tirsan Paris Saint-Germain ayaa lagu soo waramayaa inay ‘ka qoomameynayaan’ kordhinta qandaraaska Neymar ee kooxda ilaa Juun 2025.
30-sano jirkaan ayaa heshiis cusub qalinka ugu duugay kooxda reer France bishii May ee lasoo dhaafay, waxaana haatan ay ka go’an tahay kooxda Mauricio Pochettino ilaa dhamaadka xilli ciyaareedka 2024-25, iyadoo dookh u ah 12 bilood oo dheeri ah.
Si kastaba ha ahaatee, xiddiga heerka caalami ee dalka Brazil ayay ku adkeyd inuu soo bandhigo qaab ciyaareedkiisa ugu wanaagsan heerka kooxeed xilli ciyaareedkan, isagoo dhaliyay 7 gool, islamarkaana caawiyay 5 gool 22 kulan oo uu saftay tartamada oo dhan.
Dhawaan waxaa jiray hadal heyn ku saabsan mustaqbalka weeraryahanka, iyadoo Barcelona iyo Newcastle United ay labaduba xiiseynayaan adeeggiisa.
Sida laga soo xigtay Sport , madaxda PSG ayaa ‘ka qoomameeyay’ inay u gacan geliyaan Neymar lacag qaali ah, iyadoo la rumeysan yahay in ciyaaryahanka reer South America uu ka heli doono 33 milyan ginni xilli ciyaareedkii Paris.
Warbixinta ayaa sheegeysa in dhibaatada dhaawaca ee weeraryahanka iyo arrimaha garoonka ka baxsan ay sidoo kale u horseedeen niyad jab kooxda.
Neymar, oo ay dhawaan ku oorinayeen qeyb ka mid ah taageerayaasha PSG, ayaa dhaliyay 94 gool, waxaana loo diiwaan geliyay 57 caawin 138 kulan oo uu u saftay Les Parisiens tan iyo markii uu ka yimid Barcelona bishii Ogosto 2017.